यीनै हुन् सन्ध्या परियार जसलाई दाङमा बबई खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा मृ”त्यु – Sandes Post
यीनै हुन् सन्ध्या परियार जसलाई दाङमा बबई खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा मृ”त्यु
May 4, 2022 347
खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा दाङमा एक किशोरीको मृ”त्यु भएको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ४ हस्नापुरकी सन्ध्या परियारको हस्नापुर खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा मृ”त्यु भएको हो। डिएसपी श्यामु अर्यालका अनुसार सोमबार अपरान्ह परेको भारी पानीले हस्नापुर खोलामा ठूलो बाढी आएको थियो। घर फर्कने क्रममा खोला तर्दा परियारलाई बगाएको थियो।
परियारलाई बाढीले बगा”एको खबरपछि इलाका प्र”हरी कार्यालय हापुरेबाट प्र’हरी नायब निरीक्षक केशबराज रेग्मीको नेतृत्वमा खटिएको प्र”हरी टोलीले बगेको स्थानदेखि करिब एक सय५० मिटर दक्षिणबाट उनलाई उद्धार गरेको थियो। गम्भीर अवस्थामा रहेकी उनलाई तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। त्यही उनको मृ”त्यु भएको हो। किशोरीका आमाबुवा भारतमा छन्।
यस्तै,,आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानलाई साउदी अरबले ८ अर्ब डलर सहयोग गर्ने भएको छ। साउदी अरबको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको भ्रमण टोलीले उक्त सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। साउदी अरबको सहयोगले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र सुधार्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको समाचार संस्था पीटीआईले जनाएको छ। पछिल्लो समय साउदी अरेबियाले पाकिस्तानलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।
आर्थिक संकटमा परेको पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत महिना ११ अर्ब डलरभन्दा तल झरेको थियो। एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पाकिस्तानले तेलको सहयोग १ अर्ब २० करोडबाट बढाएर २ अर्ब ४० करोड डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा साउदी अरेबिया सहमत देखिएको हो। साउदी अरेबियाले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको कार्यकालमा पनि पाकिस्तानलाई ४ अर्ब २० करोड डलरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो।
Prevदाँतको बीचमा खाली ठाउँ छ? त्यसैले बुझ्नुहोस् कि तपाई धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, जान्नुहोस् तपाईमा के गुणहरू छन्
Nextनेपाली विधार्थीहरुले धमाधम पाउँदै क्यानडा अध्ययन भिषा !
कतार G4s Security मा २०० जनाको माग, बेसिक तलब नै १५ सय कतारी रियाल